Hammarkross Hazemag UNIVERSA 2030 Peabody Holmes - fanapotehana haingam-pandeha
Sarotra ny fako, misy singa izay miova endrika isan'andro, isaky ny toerana. Ny fanodinana ara-toekarena ny karazany samihafa hita ao amin'ny fako an-trano, be dia be, varotra ary indostrian'ny indostria dia miankina betsaka amin'ny fizotran'izay ampiasaina. Ny dingana voalohany amin'ny fanodinana tsara dia famoretana mahomby.
Ny milina fanodinana dia mazàna ny famolavolana karazana fako antonony, ary ny teknolojia fanodinkodinana dia fandefasana foana ho fatrany amin'ny fametrahana ny karazana fako betsaka araka izay azo atao. Ity dia endri-javatra manokana amin'ny fanamboarana ireo trano sy fako matetika miaraka.
UNIVERSA 2030 tranobe matanjaka sy milahatra dia afaka misokatra hidradrano, mahatonga ny milina ho mora vidina haingana. Ny fidiran'ny UNIVERSA dia natao hisorohana ny fanakanana, na dia miditra amin'ny masinina aza ny habetsaky ny fako avo indrindra.
Ny motera, ny fon'ny masinina dia mandeha amin'ny fehin-tsolika mihodina eo amin'ny tena. Ny rotor dia fanamboarana lasantsy ary voalanjalanja amam-bika ary misy kofehy roa nify miforitra, izay atao ao anaty lavaka manodidina ny sezan'ny rotor na hydraulically na miaraka amin'ny famahana fametahana haingana.
Fitaovana napetraka manodidina ny rotor dia misy ny apron-nify feno lohataona iray, lalan-javaky ary famoronana. Ny roa amin'ireo grille dia ao anaty ampahany roa, apetaka amin'ny troli. Ny lalan-drovotra dia mety mihetsika ihany koa. Apron, lalana fragmentation sy grés dia voatosika hidradrika amin'ny toerana hiasa.
Ho fiarovana ny UNIVERSA amin'ny fahasimbana ateraky ny zavatra mijanona ao anaty fako dia omena volavola ny fonon-tsofina anatiny. Ireo faritra ireo dia atsipin'ny rotor ary mahatratra ny chute fivoahana. Misy varavarana lamba dia omena amin'ny toerana avo indrindra amin'ny tranonkala mba hisorohana ny jiro sy ny fanendahana tsy hiala amin'ny masinina.
Ny fizarazarana ny ampahany betsaka, ny indostrian'ny trano, ny fako sy ny fanary ny trano sns, manodidina ny 400 mm dia ampy ny fampiasana ny fiantraikan'ny apron fotsiny. Mihemotra ny lalan'ny fandroranana sy ny parasy.
Ny fako dia azo ahodinkodina amin'ny 200 mm amin'ny alàlan'ny fampiasana apron sy làlan-jaza. Amin'ity tranga ity dia mijanona ny mitsivalana.
Ireo kofehy telo rehetra dia ampiasaina hanamboarana ny fako ao an-trano, na ireo fako kely manimba ny fako toy ny fandriana, ny karipetra, ny fonosana ary ny kodiarana fiara.
Zava-maniry lozabe. 1980. Fa
Crusher rotary miaraka amina fitaovana famoretana tsy tapaka.
Lanjan-drano Rotor manodidina ny 25 taonina. 480 rpm Solika vy.
Ny halavan'ny Rotor: 3000 mm.
Ny halavan'ny Rotor: 2000 mm.
Mitentina 100 taonina ny lanjan'ny lanjan'ny lanja crusher.
Ny rafitry ny graulika azo asiana vahaolana amin'ny fifehezana ny sombiny habe amin'ny 10-40 cm.
Môtô 500 kW. Feno amin'ny motera elektrika sy starter.
Mandany 1000 ora ihany.
Ny zavamaniry dia ravana sy mora mifindra any amin'ny toerana fametrahana vaovao.
Azo atao ny manome fitaovana, ohatra -apron.